Bheji rekutanga rekushandisa yezviputi zveICU zvechipukang chipatara munzvimbo yedenda reMalawi zvakaendeswa zvinobudirira nemhepo.
Kuala Lumpur, Kubvumbi 6 (AFP) - kubva musi wa12 PM nhasi, mabhuku anoverengeka echiMalaysia akange asimbisa nyaya gumi nematanhatu uye makumi matanhatu nemaviri akafa, zvichiunza huwandu hwenyaya dzakasimbiswa kune 3,793. Nhasi, vanhu makumi maviri nenhanhatu vakadzingwa muchipatara, vachiunza huwandu hwenyaya dzakawanikwa kune 1,241.
Pamusoro pezvo, sekureva kwegurukota rezvekutakura vanhu vemuMalawi wei jiaxiang, Malaysia yakatorwa kubva kuChina mabhedha zana akakodzera kuwaniswa kunzvimbo dzekutakura vanhu akaiswa muma batch.Chikamu chekutanga chemibhedha makumi maviri neshanu chakasvika muMalaysia zuva rakatangira nezuro uye vakaendeswa kuzvipatara zvehurumende zvakati nezuro. .
Vakatenda hwaro hwemafuta erudzi nekupa kwavo kwakakura kwemabhedha zana mune yekurapa varidzi venzvimbo kune hutano hwehutano pakurapa varwere vekoronavirus.
Iyi mibhedha yakarairwa zvakanyanya kubva kune hebei pukang medical Equipment co., Yakakura kwazvo yekugadzira michina yekurapa mu hebei, China.Pasiripo, nyika dzakawanda pasi rese, kusanganisira Italy, Spain, United Kingdom neUnited States, dziri kuraira mibhedha kubva kuChina shandisa munzvimbo dzakasimba dzekutarisira.
Sekureva kwegurukota rezvekutakura vanhu vekuMalawi, wei jiaxiang, "hazvisi nyore kuburitsa mibhedha iyi, imwe neimwe inorema kusvika 250kg, munyika medu. Hushumiri hwekutakura hunofanirwa kuronga ndege nhatu kuti dziuyise mabhedha munyika yedu."
Kubva iyo civil aviation management yeChina (CAAC) yakarambidza vatorwa kuti vapinde muChina kubva munaKurume 28, hushumiri hwekutakura vanhu vanofanirwa kunyatsoshanda kuCCA kubvumidza ndege dzinotakura vanhu kuenda kuTianjin neBeijing, vakatakura mibhedha zana yechipatara kuenda kumba mumabheti.
Nekuda kwehukuru hwakakura hwemabhedha, 28 chete mibhedha inozadza huwandu hwese ndege.
Shumiro iyi iri mukubatirana pamwe nehurumende yekushanya nendege yeChina kuti iuye nemabhedha makumi manomwe nenomwe kumba kumba nekukurumidza.
Iyi mibhedha ichabatsira kuchengetedza hupenyu hwevarwere vazhinji. Tinokutendai kune hwaro hwenyika mafuta, mweya wegasi, mumiriri weChina kuMalaysia uye hushumiri hwedu hwekunze kuti vabatsirwe kuendesa mabhedi aya kubva kuChina kuenda kuChina. ”
Pamusoro pezvo, iyo hushumiri hwehutano hweMalawi hwakatengwa kubva kuChina vanosvika makumi mapfumbamwe nevanochengetwa varidzi vekuchengeta nendege neMalawi ndege dzakatakura kubva kuShanghai kuenda Kuala Lumpur International airport nezuro husiku.Izvi zvigadzirwa zvekurapa zvinobatsira zvikuru kuchikwata chekurapa kuMalawi kuponesa hupenyu hwakakosha.